ပျဉ်ညောင်Camp သည်တောင်ကြီးကားလမ်းပေါ်တွင်ရှိပါသည်။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲဝင်စပြုနေပြီ၊ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာရှမ်းတောင် တန်းများဝိုင်းရံလျှက်ရှိသည်.။
ကျွဲတပ်ဆုံ Camp မှ TE ကားတွေနှင့်လာခဲ့ကြသည်။ကျွဲတပ်ဆုံကသာစည်နယ်ထဲမှာရှိသောကြောင့်ရာသီဥတုပူပါသည်။
မင်းတို့ခလေးတွေမဟုတ်တော့ဘူး….နေတဲ့ ၁၀ ရက်လောက်ကိုသည်းခံပြီးနေကြပါ……..ဆရာကျနော်တို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါတယ်…….
ဒီနေ့ Camp ပြောင်းသောကြောင့် Field မဆင်းပါ။ရာသီဥတုအေးနေသောကြောင့်ရေချိုးဘို့ပျင်းနေကြပါသည်။ အခြားအဖွဲ့ရေချိုးသွားမယ်လို့အသံကြားတော့ကျနော်တို့လဲလိုက်သွားကြပါသည်။
ပျဉ်ညောင်ရွာထိပ်နားလောက်တွင်တံတားတစ်ခုရှိပါသည်။ပျဉ်ညောင်တံတားသည် ရွေသွေးချောင်းကိုဖြတ်၍ဆောက်ထားပါသည်။ ကျနော်တို့အားလုံးရွေသွေးချောင်းမှာရေသွားချိုးရပါသည်။
အဖွဲ့လိုက်အုပ်စုလိုက်ရောက်နေကြပြီ။ပိုးဟပ်ဖြူနှင့်အာနိုးတို့နှစ်ယောက်ဘယ်အချိန်ကတည်းကရောက်နေလဲမသိပါ။ရွေလိမ္မော်တစ်ဝက် ကျိုးနေပြီ။အာနိုးကတော့ပိုးဟပ်ဖြူအတွက်စားစရာအမြည်းကိုကိုယ်တိုင်မီးဖိုထဲမှာကြော်လှော်နေပါသည်။ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်းသဘော ကောင်းပါသည်။
ကျောင်းသားမို့လို့လားမသိ၊ဘာဆိုဘာမှမပြော။ကြိုက်သလိုသဘောရှိ ….. ကျနော်တို့အားလုံးသည်တစ်ဆိုင်လုံးနှင့်ခဏအတွင်းမှာပင်ရင်းနှီးသွားကြပါသည်။
ပျဉ်ညောင် Camp ပထမည မှာ… ပူသောနေရာမှပြောင်းလာ၍လားမသိ……အရိုးကွဲမတတ်အေးစက်နေပါသည်။ ကျနော်တို့အားလုံးမအိပ်နိုင်တော့ပါ။အားလုံးစုထိုင်ပြီးမီးလှုံရင်းစကားပြောနေကြသည်။
ပျဉ်ညောင်မှာ Field ဆင်းရတာရာသီဥတုအေးသဖြင့်ပင်ပန်းသည်ဟုမထင်ရပါ။အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှမ်းတောင်တန်းများရစ် ခွေနေသဖြင့် Field ဆင်းသည့်အခ冕်ဝိုက်မှာရှမ်းတောင်တန်းများရစ် ခွေနေသဖြင့် Field ဆင်းသည့်အခါတိုင်းတောင်တက်ရလေ့ရှိသည်တောင်ပေါ်တက်လိုက်၊တောင်ကြောတွေထဲဆင်းလိုက်…. ထို့အတူရွေသွေးချောင်းသည်လည်းကျနော်တို့ Field ဆင်းသောနေရာများနှင့်မကင်းခဲ့ပါ။သူလဲဒီနေရာဒေသလေးမှာရစ်ခွေပြီး
ပျဉ်ညောင် Camp မှာရှိနေစဉ်ကျနော်တို့အားလုံး Camp ဂျူတီကျသောနေ့များတွင်ဘယ်မှမသွားတော့ပါ။
ပျဉ်ညောင်ရွာမှကားလမ်းအတိုင်းအပေါ်ဆက်တက်သွားပါက ၃မိုင် ၄မိုင်လောက်တွင်ရေပူစမ်းတစ်ခုရှိသည်။
ရွေသွေးချောင်းဘေးကပ်ရက်ထုံးကျောက်တောင်တွေကြားမှရေပူများထိုးထွက်နေပါသည်။Camp ဂျူတီကျသောနေ့များတွင်လျှော်စရာအ ၀တ်များကိုယူပြီးရေပူစမ်းကိုသွားကြပါသည်။လျှော်စရာရှိတာကိုလျှော်ပြီးရေပူစိမ်ရသည်မှာအရမ်းဇိမ်ရှိပါသည်။
ပျဉ်ညောင်ရွာမှာရာသီဥတုအေးသောကြောင့် Camp ပြန်ရောက်ချိန်နောက်ကျပါကရေမချိုးနိုင်တော့ပါ။အရမ်းအေးပါသည်။
အခုလဲ Camp သိမ်းခါနီးနေပြီ အုပ်စုလိုက် Field ဆင်းနေကြရာကျနော်တို့အဖွဲ့အလုပ်များမပြီးပြတ်နိုင်သဖြင့် Campပြန် နောက်ကျပြီးရေမချိုးဖြစ်တာသုံးရက်တောင်ရှိနေပြီ။ကိုယ်မှာလဲအနံ့ပေါင်းစုံထွက်နေပြီဟုထင်ပါသာည်။
ဘေးမှာလဲလ္ဘ္ဘက်ခင်းများကို စိမ်းစိမ်းစိုစို …..တွေ့နေရပါသည်။
အချိန်ကလဲ ၂း၃၀ လောက်ရှိနေပြီ။မထူးတော့ပါ။
ညနေ Camp ပြန်ရောက်မှရေပူစမ်းသို့ထပ်သွားရန်မသေချာ။စောစောပြန်ရောက်မရောက်တပ်အပ်မပြောနိုင်။
ထိုကြောင့်ကျနော်တို့အားလုံးအစီအစဉ်ပြောင်းလိုက်ကြသည်။ရွှေသွေးချောင်းမှာဘဲရေချိုးတော့မည်။ ရွှေသွေးချောင်းရေလဲချိုးချင်စရာကောင်း လောက်အောင်နွေးနွေးလေး…….
“ဒီနေရာဟာ ရွာသူတွေရေချိုးတဲ့ရေချိုးဆိပ် …….”
ကျနော်တို့ Field ထဲလျှောက်သွားရင်း ဗိုက်ပြန်ဆာလာလေ့ရှိပါသည်။
ကျနော်တို့ Geology ကျောင်းသားများကွင်းဆင်းနေတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကအားလုံးသိကြပါသည်။
ကံကောင်းရင် MSK ရနိုင်တယ် …..BN လဲမဆိုးပါဘူး……
MSK မှာမုန့်ဆီကျော်နဲ့တူသောရှမ်းမုန့် ..BN ငှက်ပျောသီး ..ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ်…..
“သေသူကအသက် ၃၀.. ၀န်းကျင်အမျိုးသမီး”
သူကြီးနှင့်ရွာသားတွေ ဦးစီးပြီး ရက်လည်သပိတ်သွပ်ခဲ့သည်…..
ညနေ Camp အပြန်လမ်းမှာသူ့ကိုဝိုင်းပြီးအစလွန်ခဲ့တာကိုလဲနောင်တရမိသည်။
Camp မရောက်ခင်လမ်းတစ်ဝက်လောက်နားနေခိုက်ဗျော့ကြီးရေဗူးနှင့်ရေအပြည့်ဖြည့်ထားသောရေဗူး ကိုဗျော့ကြီးမသိအောင် …လဲထားလိုက်သည်။
ဗျော့ကြီးတစ်ယောက်လက်နှိပ်မီးယူပြီး Camp ပေါ်စိတ်မသက်သာစွာနှင့်တက်သွားပါသည်။
မီးမရှိသောကြောင့် Camp တခုလုံးမှောင်မဲနေသည် ..
ဗျော့ကြီးငယ်သံပါအောင်အော်လိုက်သောအသံ Camp တစ်ခုလုံးကိုလွမ်းသွားပါသည်။
၀ုန်းဒိုင်းနှင့်တံခါးဆောင့်ဖွင့်သံတွေရော၊တ၀ုန်းဝုန်းပြေးသံတွေရောထွေး ပြီး Camp အပြင်ဘက်သို့ဗျော့ကြီးတစ်ယောက်ဝုန်းကနဲ ပစ်ကျလာပါသည်။
ကျနော်တို့မေ့နေကြ တာက …ခလေးတွေရှိနေသောသူတို့အိမ်ထောင်ရေး…..
စောင့်ထိန်းရမယ့်လူ့ စည်းကမ်းများကိုအစဉ်လေး စားလိုက်နာရပါမည်……
ဒီသတင်းကိုကြားစဉ်က ပျဉ်ညောင်..ည မှာ….